Zaridaina mitsangana: toetra, fomba fanaovana azy sy fitaovana | Fanavaozana maintso
Betsaka ny olona mankafy zaridaina an-tanàn-dehibe na zaridaina an-trano. Ity dia faritra ahafahanao mamboly ny volanao manokana rehefa mianatra momba ny zaridaina sy ny fambolena. Mety ho fampiasana tsara ho an'ny ankizy kely izany ary miaraka amin'ny fianakaviana. Izy io koa dia miasa ho an'ny fizakan-tena. Na izany aza, maro ny olona no tsy manana toerana ampy hambolena vokatra ao amin'ity zaridainan'ny fianakaviana ity. Noho io antony io dia nantsoina ny hevitra fampandrosoana Zaridaina mitsangana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny fiasan'ny zaridaina mitsangana.
2 Fepetra zaridaina mitsangana
3 Ahoana ny fomba fanaovana zaridaina mitsangana
4 Torohevitra famolavolana
Araka ny tondroin'ny anarany dia miresaka zavamaniry maniry ao anaty zaridaina mitsangana izahay. Raha tokony hipetraka amin'ny habaka marindrano isika dia handeha hamboly mitsangana mba hampivelatra tsara kokoa ny habaka. Ity fomba fiaina ity dia efa nisy hatry ny ela ary safidy mahasalama mifanaraka amin'ny tontolo iainana. Indraindray izy ireo dia olona ratsy fanahy izay mahatsapa ny fihinanana sakafo mahasalama sy ireo vokatra izay napetratsika teo am-bavantsika. Mila miaina kely ny tontolo iainana manohitra zezika, herisetra, mpamono otrikaina sns. Izany dia ampiasaina amin'ny fambolena.
Amin'izany no ahatongavantsika amin'ny fampiroboroboana ny voly ao an-trano nefa tsy hipetraka amin'ny faritany be loatra. Ny asan'ny zaridaina mitsangana dia mifandraika amin'ny sakafo ara-tsaina sy hetsika mifandraika amin'ny fanodinana sy angovo azo havaozina. Mihabetsaka ny olona no miditra amin'ity fomba fiaina ity izay ananany zaridaina biolojika ao an-trano. Misy endrika zaridaina mitsivalana tsara tarehy marobe izay mampiasa zavatra namboarina ho an'izany.
Fomba iray hamoronana ny zaridaina mitsangana dia ny mampiasa boaty, boaty baoritra, paleta, Sns Ny firafitry ny zaridaina mitsangana dia azo alehan'ny mpiasa avy any amin'ny faran'ny iray ka hatramin'ny iray hafa mba hahafahany mankafy ny atitany. Matetika misy lamba firakotra maitso lehibe manarona ny faritra manontolo ary azo zakaina amin'ny alokaloka ireo zavamaniry voafantina ho an'ity faritra ity. Tokony ho raisina fa ny voly dia tsy ho an'ny sakafo fotsiny, fa mety ho voly haingo ihany koa. Azontsika atao ny mamolavola ny firafitra navelantsika ho an'ny zaridainanay mitsangana amin'ny fombantsika.
Fepetra zaridaina mitsangana
Ireo zavamaniry voafantina ho an'ity dia tsy maintsy zakaina amin'ny alokaloka amin'ny fotoana tsy maintsy antonony ny firafitry ny rafitra ny mari-pana mba hanana anatiny sy mangatsiatsiaka. Ny hevitra zaridaina mitsangana dia tokony hijerena ny fametrahana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana ambany satria manome tolo-kevitra vaovao amin'ny zaridaina mitsangana izy. Ity dia ohatra lehibe iray amin'ny fomba azo atao hanodinana ireo zavatra mba hamoronana toerana tsy manam-paharoa sy hanararaotana ireo karazan-javamaniry maro izay afaka maniry raha ilaina ny toerana eny ambonin'ny tany ary hambolena ao.
Ankoatr'izay, ny originality dia milalao amin'ity karazana tetikasa ity. Ary ny zavatra iraisana dia azo ovaina ho zavatra tany am-boalohany kokoa ary noforonina mba hanampiana ny olon-kafa hampirisika azy ireo hamorona endriny manokana an'ny zaridaina mitsangana. Afaka manana habaka maintso ao an-trano ianao tsy mila toerana betsaka ary miaraka am-boalohany. Makà ohatra iray ary araho ny famolavolana ary avy eo ovao ho zavatra amin'ny fombanao manokana. Na dia tsy misy toerana malalaka ao an-trano aza dia afaka mankafy ireo zavamaniry ireo miaraka amin'ny tolo-kevitra samihafa sy manavao.
Ahoana ny fomba fanaovana zaridaina mitsangana
Izahay dia hanazava ny dingana lehibe izay tsy maintsy raisininao mba hanaovana zaridaina mitsangana anao. Mba hanaovana zaridaina mitsangana ao an-trano dia tsy mila rindrina fotsiny ianao hametrahana ny firafitra sy kaontenera hametrahana zavamaniry, tany ary zezika. Mazava ho azy fa misy koa ireo zavamaniry hamboleko. Ireo mpamboly dia azo averina madiodio tanteraka. Toy ny homamiadana ao anaty zaridaina, ao amin'ny zaridaina mitsangana dia manana teknikan'ny fambolena manokana izy ireo. Misy karazana fitaovana isan-karazany azo ampiasaina toy ny kaontenera na vilany.
Ireto misy fitaovana ilaina indrindra dia ireto manaraka ireto:
Tavo plastika: Ireo izay 5 litatra dia mora tadiavina ary lehibe ny habeny. Mila apetratsika fotsiny ilay izy amin'ny alàlan'ny fanapahana ny tapany ambony ary afaka manana toerana tsara hambolena isika.
Tavoahangy plastika: Izy ireo dia ampiasaina amin'ny zavamaniry kely indrindra ary azo apetraka amin'ny fanapahana azy ireo avy eo ambony.
Paleta hazo: kitapo plastika dia tsy maintsy apetraka amin'ny habakabaky ny paleta izay hambolena ny vokatra.
Akanjo kiraro lamba: Izy io dia iray amin'ireo fitaovana fanodinam-bokatra izay azontsika haverina ampiasaina ho an'ny zaridainanay mitsangana. Tsotra ihany ny fampiasana azy. Tsy mila mametraka zavamaniry iray fotsiny isika isaky ny efitrano.
Andao izao hanome anao torohevitra famolavolana ho an'ny zaridaina mitsangana:
Misafidiana faritra iray amin'ny trano izay iposahan'ny masoandro mandritra ny ora maromaro. Ny masoandro dia singa iray manan-danja amin'ny zavamaniry hitombo ary ny voly dia mivelatra tsara. Tsy maintsy misafidy rindrina mahazaka hazavana ampy isika.
Safidio tsara ireo kaontenera: ny tena fahita dia tavoahangy plastika na tanimanga. Raha hanangana ny zaridaina hamboly legioma isika, dia tokony ho 20cm ny halalin'ny fitoerany.
Tany sy zezika: Ilaina ny mampiasa tany manankarena otrikaina sy zezika voajanahary izay mety amin'ny vilany.
Fantaro ireo zavamaniry ambolentsika: Tokony ho fantatsika hoe inona ny karazana zavamaniry ambolentsika sy ny karazana fitomboany. Raha fitomboana haingana na miadana dia ny habetsaky ny rano sy hazavana ilain'izy ireo sns.
Rafitra fanondrahana: Amin'ny maha-rafitra mitsangana antsika dia afaka mampiasa endrika isan-karazany amin'ny rafitra fanondrahana. Ny tranainy indrindra dia ny manisy lavaka kely ao anaty kaontenera ambony mba hianjeran'ilay rano be ao anaty ilay ambany. Amin'izany no ahafahantsika manatsara ny fanondrahana sy ny rano amin'ny fomba mahomby kokoa.
Araka ny hitanao, ny zaridaina mitsangana dia fomba tsara hianarana momba ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fambolena any an-trano ary mety ho hetsika tena tsara miaraka amin'ny fianakaviana izany. Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fanaovana zaridaina mitsangana sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Orchard mitsangana
Fomba fanamboarana savony